नेपाल आज | संसदको त्यो दश मिनेट, देउवा नाराबाजीमा, ओली हेरेको हेर्यै, प्रचण्ड मुसुमुसु
संसदको त्यो दश मिनेट, देउवा नाराबाजीमा, ओली हेरेको हेर्यै, प्रचण्ड मुसुमुसु
मङ्गलबार, ०३ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा रोचक दृश्य देखियो । ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो सुरु भयो ।
राष्ट्रिय गानपछि सभामुखले भने –‘माननीय सदस्यहरु प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ । ’ लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद जर्याक जुरुक्क उठे । सबै सांसद उठेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि कोटको बटम कस्दै उठे ।
सभामुखले भने –‘ माननीय सदस्यहरु, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नका लागि समय माग्नुभएको छ म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिन्छु । ’ तर कांग्रेस सांसदहरुले टेबुल ठटाउँदै पहिले बोल्न समय मागे । कालो ब्याग लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसदका नमस्कार फर्काउँदै बोल्नका लागि रोष्ट्रम पुगिहाले ।
कांग्रेसका एक सांसदले भने – ‘ सभामुख ज्यू, प्रतिपक्षीका कुरा सुनिदिनुप¥यो । सम्मानीय सभामुख महोदय । ’ सभामुख– ‘ मैँले प्रतिपक्षीलाई समय दिन्छु माननीय सदस्यहरु, पहिले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनौँ, त्यसपछि प्रतिपक्षीको कुरा सुनिन्छ माननीय सदस्य । ’
तर कांग्रेस सांसदहरु चुप बसेनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड रोष्ट्रम घेर्न अगाडि हिँडेपछि अन्य सांसदहरु पनि पछि लागे । सबै सांसदहरु धमाधम रोष्ट्रम घेर्न आएपछि मर्यादापालकहरु हात बाँधेर सांसद घेर्न थाले । सभामुखले भने – ‘पहिले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनौँ । ’
सभामुखको यस्तो कथनमा सत्तापक्ष भने टेबुल ठटाएर समर्थन गर्दै गर्दा प्रतिपक्षीले भने– ‘प्रतिपक्षीको कुरा सुन्नै पर्छ । ’ सभामुखले फेरि भने –‘ पहिले प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनौँ त्यसपछि समय दिन्छु । ’ तर प्रतिपक्षी चुप बसेनन् नाराबाजीमा उत्रिँदै भने – संसदीय मर्यादा कायम गर । प्रतिपक्षले बोल्न पाउँनै पर्छ । ’ देउवा नाराबाजीमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री हेरेको हेर्यै भए भने प्रचण्डचाहिँ माधव नेपालसँग खाशखुश गर्दै मुसुमुसु हाँसिरहे ।
नाराबाजी जारी रहँदै गर्दा सभामुखले भने–माननीय सदस्यहरु पहिले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनौँ । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले समय पाउँछ । म समय दिन्छु । ’ सभामुखले यसो भन्दा सत्तापक्ष टेबुल ठोक्न थाले । नाराबाजी रोकिएन । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्न बारम्बार आग्रह गरिरहे – ‘प्रधानमन्त्रीलाई पहिले बोल्न दिऔँ । त्यसपछि म प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समय दिन्छु माननीय सदस्य । ’ तर नाराबाजी रोकिएन ।
अन्नतः सभामुखले भने – ‘माननीय सदस्यहरु अब यो बैठक २०७६ साल असार ४ गते बुधबार ११ बजे बस्नेगरी यहीँ स्थगित हुन्छ । ’
बैठक स्थगित भएपछि पनि कांग्रेस सांसदहरुले कराइरहे – ‘गुठी विधेयक फिर्ता गर ।’
अब भने प्रधानमन्त्री रोष्ट्रमबाट मुसुमुसु हाँदै आउँछन् र प्रचण्डसँग हात मिलाउँछन् । दुवै जना कुरा गर्दै बाहिर निस्कन्छन् । नाराबाजीमैँ रहेका कांग्रेस सांसदहरु नमस्कार गर्छन । तर प्रधानमन्त्री कसैसँग हात मिलाउँदैनन् र हिँडिरहन्छन् ।
बैठकअघि सभामुख महराले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग बैठकको कार्यसूचीका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो । तर छलफल कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसके पछि सभामुख महराले बैठक आरम्भ गरेका थिए ।
प्रचण्ड र ओलीबीच बोलचाल बन्द!
बैठक सुरु नहुँदै किन बैठक स्थगित ?
नेकपाका सङ्गठित सदस्य पन्ध्र हजार, विभाग उनन्तीस